I-Apple Cider eneRum eqholiweyo - Malunga Cocktails
I-Apple Cider eneRum eqholiweyo
Uyenza njani iToddy eshushu
Xa isimo sezulu sibanda, lixesha eligqibeleleyo lokufunda ukwenza i-apple cider ngeramu eqholiweyo. Akukho mfuneko yokuba ubenezakhono zompheki; Into ekufuneka niyazi yindlela yokuvula isitovu. Ncedisa esi siselo somthendeleko kwitheko lakho leholide okanye uliphuze ekhaya ngomlilo.
Uyenza njani iApple Cider ngeRum enezinongo
Ukwenza le cocktail imnandi kuthatha ixesha elincinci, kodwa yinkqubo elula. Okokuqala, hlanganisa izithako zakho. Uya kudinga:
Igaloni yeapile cider okanye incindi yeapile
Malunga ne-10 yesinamon stick
1 ithisipuni nganye ye-allspice kunye nee-clove
Iziselo zeholide zeKrisimesi ezili-18
Kwimbiza enkulu okanye ipani, galela i-cider, yongeza isinamon stick kunye neziqholo, unyuse ubushushu esitovini. Vumela umxube ukuba ubilise malunga nemizuzu emihlanu, kwaye unciphise ubushushu kwaye uvumele ukuba uhlale imizuzu eli-15. Yongeza i-rum ukunambitha, uze uhluthe umxube kwenye ibhokhwe. I-cheesecloth isebenza kakuhle ekususeni nawaphi na amasuntswana kunye nezinto ezinkulu, njengezinti zesinamon. Unokukhetha ukusonga iziqholo kwi-cheesecloth ngaphambi kokuba uzongeze kwi-cider ukuze uzigcinele eli nyathelo.
Unokwenza i-spider cider ngokusebenzisa i-crockpot. Vumela umxube ukuba upheke ezantsi kangangeeyure ezintathu okanye ezine kwaye usebenzise i-ladle ukukhonza i-cider xa sele ukulungele. Kule meko, kuya kufuneka ubophe izinongo kwi-cheesecloth ukuze kunganyanzeleki ukuba ucofe ulwelo. Qiniseka ukuba ukhonza i-cider kwiiglasi ezingashushumbisi. Sebenzisa iikomityi zekofu zekheram okanye iikomityi zeglasi ziya kubonisa umbala omhle womxube. Gcoba iglasi nganye ngentonga yesinamoni.
Abanye abantu baziva ngathi iRum kaCaptain Morgan yinto elungileyo kwesi siselo kuba simnandi kwaye sinencasa edibanisa kakuhle nezinye izithako. Abanye bakhetha ukusebenzisa irum emnyama enencasa, nayo eswiti kodwa iyatshaya kancinci. IGosling luphawu oludumileyo lweRum emnyama kwaye inokusetyenziselwa ukwenza iiCocktails eziMnyama kunye neNkqwithela. Nokuba ukhetha i-rum, ungaziva unyanzelekile ukuba usebenzise iramu ebiza kakhulu. Nayiphi na iramu esisiseko eya kuyenza.
Unokufumanisa ukuba ukhetha i-apple cider yakho ene-spiced rum eyahlukileyo kancinci kunendlela echazwe ngayo iresiphi, ke zama ezi nguqu:
Thumela i-rum ngentombi engazani nandoda okanye enobuntwana.
Lindela kwaye ungeze irum xa usela isiselo ukuze iindwendwe zikhethe indlela ezinqwenela ngayo ukusela.
Yenza i-rum ene-buttered, ene-spiced ngokongeza ibhotolo encinci kwimug nganye ngaphambi kokuba uthele i-cider kunye ne-rum. Sebenzisa ibhotolo yokwenyani endaweni yokufumana iziphumo ezilungileyo.
Gquba iswekile emdaka ukuba ukhetha i-cider yakho enencasa kwicala elimnandi.
Nangona uhombiso oluqhelekileyo luyintonga yesinamon, ungongeza enye incasa yencasa ngokufefa iilekese ze-butterscotch kwisiselo sakho.
Ntlitha izilayi ezincinanana ze-apile kwisiselo sakho.
Yongeza ijusi ye-cranberry ukwenza umbala othile wefestile kwi-cocktail yakho.
Yongeza i-lemon rind xa ulungiselela i-cider ukuyiboleka itartness ethile.
I-Apple cider ene-rum eqholiweyo yenza ipati enkulu isele kuba ungayilungiselela kwangaphambili. Cinga ukuyenza njengesiselo sokubulela okanye njengonyango lweKrisimesi. Yiphake emva kwesidlo sangokuhlwa njengenye indlela yokutya, kwaye iindwendwe zakho ziya kushiya zifudumele kwaye zonwabile.
Ikrisimesi Imiboniso Yesilayidi Iliso Makeup Techniques Iwayini Izixhobo Umtshato Womtshato Umthetho Wabucala
Umhlaza indoda efanelekileyo yomtshato
oobawo izipho ngosuku step utata
Umbala weenwele ogqwesileyo weenwele zaseMelika
Kutheni ibhulorho yesango legolide ibizwa njalo
Indlela yokwenza indian costume kwihempe
ubunzima obuqhelekileyo bomntu oneminyaka eli-14 ubudala